क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका व्यक्तिको रिपोर्ट नआउँदा दाहसंस्कारमा ढिलाई » हल्लाखाेर
कुश्मा, ४ साउन। दक्षिण पर्वतको पैयुँ गाउँपालिकास्थित सामुदायिक क्वारेन्टाइनमा बसेका एक व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि गाउँको क्वारेन्टाइनमा पठाइएका ५२ वर्षीय यामबहादुर भारतीको मृत्यु भएको हो ।
पैयुँ गाउँपालिका–६ का भारतीको शुक्रबार राति गण्डकी अस्पताल पोखरामा मृत्यु भएको हो । श्वासप्रश्वासमा समस्या आएपछि शुक्रबार राति उनलाई अस्पताल पुर्याइएको थियो । उनलाई राति नै चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए ।
‘नियमित औषधि सेवन समेत नगरेको देखिएका कारण उच्च रक्तचापले गर्दा हृदयघात भएको हुन सक्छ,’ डा. देवकोटाले भने । गण्डकी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पुर्याएपछि उनलाई मृत घोषित गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका प्रमुख डिएसपी विश्वराज अधिकारीले जानकारी दिए । मृतक भारती भारतबाट असार १६ गते कुस्मा आएका थिए र पुलिङ क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए । कोरोना रिपोर्ट परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्र गाउँ पठाइएको थियो ।
कोरोनाको लक्षण नदेखिएको भए पनि उनको दाहसंस्कारमा सहज बनाउन स्वाबको नमुना लिइएको डा. गौतमले बताए । ‘क्वारेन्टाइनमै रहेको हुँदा एक पटक स्वाब लिएर रिपोर्ट आएपछि मात्रै दाहसंस्कार गर्न सल्लाह दिएका छौँ,’